शीतल निवासका सल्लाहकारको मत : धनभन्दा विद्या ठूलो, विद्याभन्दा धन ठूलो ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
शीतल निवासका सल्लाहकारको मत : धनभन्दा विद्या ठूलो, विद्याभन्दा धन ठूलो !
मंसिर ८, २०७५ शनिबार ७:४५:३५ | मिलन तिमिल्सिना
दसैँमा शीतल निवास पुगेर टीका थाप्नेको शीर झुकेको थियो । तिहारको टीका सकिएपछि भने शीतल निवासको आफ्नै शीर झुकेको जस्तो देखिन थाल्यो ।
शीतल निवासको शीर ठाडो पार्न त्यहाँ ठूलै दलबल छ, सल्लाहकार र विज्ञ नामको । उनीहरु शीतल निवासका हर्ताकर्ता, बिघ्न हर्ता । शीतल निवासको शीर ठाडो पार्न दिनरात चिन्तित सल्लाहकार र विज्ञहरु यस्तो बेला चिन्तनशील र गम्भीर नहुने कुरै भएन ।
त्यसैले सल्लाहकारहरु एक ठाउँमा भेला भएर कोही शीर्षासन, कोही बक्रासन, कोही पद्मासन र कोही कमलासनमा बसेर १८ करोडको गाडी र प्रहरी तालिम केन्द्रलाई हेलिकप्टर बिसौनी बनाउने कुरामा गम्भीर विमर्श गर्न थाले ।
‘हैन १८ करोडको कुरा कसरी बाहिर आयो ?’ पद्मासनमा बसेको सल्लाहकारले टाउको कन्याए ।
‘के थाहा त ? न यहाँबाट निर्णय भएको हो, न त यहाँबाट यस्तो सूचना चुहिने सम्भावना नै छ !’ शीर्षासनमा खडा भएको सल्लाहकारले फ्याँ फ्याँ गर्दै जवाफ दिए ।
कमलासनमा बसेको सल्लाहकारलाई खपिनसक्नु भयो । भने ‘बालुवाटारले खुमलटारमा खबर गर्‍यो होला, अनि खुमलटारले कुरो खुस्कायो होला नि ! ’
‘खुस्कायो होला हैन मित्र, चुहाएको हो चुहाएको ! शीतल निवासमा सल्लाहकार भएपछि शब्दको अर्थ बुझेर बोल्न सिक । यो खुस्किएको कुरो हैन, जानाजान चुहिएको सूचना हो’ बक्रासनको सल्लाहकारले विद्वता प्रदर्शन गरे ।
रगतको उर्ध्वासनले शीर्षासनवालाको टाउको रन्कन थालेको निकैबेर भैसकेको थियो । बोले ‘चुहिन त चुहियो, तर पुरै चुहाउन सकेको भए पो हुन्थ्यो । आधी चुहियो, आधी चुहिएन । एउटै गाडीको १८ करोड पर्ने त हैन नि ! राजकीय सवारीमा ३ वटा लिमोजिन चाहियो । त्यसमाथि एम्बुलेन्स र स्कर्टिङसमेत चाहियो । सबै जोड्दा दर्जन जति गाडी र मोटरसाईकल जोडेर १८ करोड भन्ने कुरा चुहिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमाथि गाडी नचढेर साइकल चढ्ने हो र ?’
‘त्यसरी चुहिएको कुरालाई चुहिएको भन्न मिल्दैन मित्र । त्यो त व्याख्या भयो । व्याख्याबाट निबन्ध बन्छ, समाचार बन्दैन । तर कुरा चुहाउनेलाई थाहा थियो, पत्रकारलाई व्याख्या मन पर्दैन, तातो अण्डा टाइपको कुरा चाहिन्छ । त्यसैले उस्ले अधुरो कुरा चुहायो’ कमलासन सल्लाहकारले गम्भीर मुद्रामा सूचना चुहावटको विश्लेषण गरे ।
‘जे जसरी चुहिएको भए पनि मान्छेले त यसै पनि आलोचना गर्थे नि महामहिमलार्ई किन चाहियो १८ करोडको गाडी भनेर ?’ बक्रासनका सल्लाहकारको बोली मिसियो ।
‘सामाजिक सञ्जाल चलाउने सञ्जालेहरुले त खेदो खनेर हामीलाई समेत गञ्जागोल बनाए नि । हुँदाहुँदा मुना मदनको प्रसंगसमेत निकालेर मदनसँग तुलना गर्न भ्याएछन्’ शीर्षासनका सल्लाहकारले सानो स्वरमा भने ।
‘गालपारा सञ्जालेहरुलाई के थाहा सबै मदनकी मुना, मुनाजस्ती हुँदिनन् । अनि सबै मुनाकी मदन, मदनजस्ता पनि हुँदैनन्’, पद्मासनका सल्लाहकार अलि बाठो हुन खोजे ।
‘तर अहिले त मदनकी मुनालाई पो देखी सहेनन् त’, कमलासनका सल्लाहकारले टाउको कन्याए ।
‘त्यति मात्र हो र, पहिले स्कुलको शुक्रबारे कार्यक्रममा हुने वादविवाद प्रतियोगिता पनि सुरु भएछ, धनभन्दा विद्या ठूलो भनेर । हुन पनि हो धनभन्दा त विद्या नै ठूलो हो’, बक्रासनका सल्लाहकारले बकबक गरे ।
‘विद्याभन्दा धन ठूलो भन्नेले पनि वादविवाद प्रतियोगिता जितेका छन् भन्ने यथार्थ पनि नभुल्नुहोस्’, कमलासनका सल्लाहकार अलि कड्किए ।
यति भन्नासाथ शीतल निवासमै सल्लाहकारहरुबीच वादविवाद प्रतियोगिता सुरु भयो ।
‘जसले जे भने पनि धन भन्दा विद्या नै ठूलो हो । हाम्रो महामहिमसँग पहिले धेरै धन थिएन । विद्या मात्रै थियो । उहाँले धनलाई जित्नुभयो, अर्थात विद्याको अघिल्तिर धनको केही लागेन । धन नभए पनि विद्या यहाँसम्म आइपुग्नुभयो’, पद्मासनका सल्लाहकारले तर्क गरे ।
‘अब यहाँ आएपछि विद्याभन्दा धन ठूलो भयो । जता फर्के पनि धन चाहियो । गाडी चढ्न पनि धन । सानो ठाउँलाई फराकिलो बनाएर बस्ने मन । त्यसैले त प्रहरीले तालिम गर्ने ठाउँमा हेलिकप्टर राख्ने रहर लाग्यो । अहिले विद्यालाई धनले जित्यो । त्यसैले विद्याभन्दा धन ठूलो’, कमलासनका सल्लाहकारले औँला ठाडो पारे ।
‘तपाईँले कुतर्क गर्नुभयो । गाडी चढ्न र फराकिलो ठाउँमा बस्ने रहर हुनु पनि धन ठूलो हैन, विद्या नै ठूलो भएर भएको हो । विद्या नभएको भए त्यो धनको कुरा कसरी आउँथ्यो ? धन मात्रै भएर भएन, विद्या पनि हुनुपर्यो । विद्या नभएको ठाउँमा धनको केही महत्व हुँदैन । त्यसैले धनभन्दा विद्या ठूलो’, बक्रासनका सल्लाहकार बुरुक्क उफ्रिए ।
कमलासनका सल्लाहकारलाई यो तर्क चित्त बुझेन । उनी जंगिए, ‘धनभन्दा विद्या कसरी ठूलो हुन्छ ? यति ठूलो निवास हेर्नुहोस्, यो वरपरको प्रांगण हेर्नुहोस्, विद्याभन्दा ठूलो छ । अझै ठूलो बनाउन छेउको प्रहरी रहेको ठाउँ समेत ताक्दैछौँ । यो जमिन, यो निवास, अनि भर्खरै आएको विद्युतीय गाडी, अनि अब ल्याउन खोजिएको १८ करोडको गाडी, यी सबै धन हुन् । यी सबै धनसम्पत्ति विद्याभन्दा ठूलो छ । त्यसैले धनभन्दा विद्या ठूलो होइन, विद्याभन्दा धन ठूलो हो ।’
विद्या ठूलो भन्ने बक्रासनका सल्लाहकारलाई फेरि चित्त बुझेन । उनले अलि नरम भएर आफ्नो अर्को तर्क तेर्साए, ‘ल विद्वानले नै भनेको कुरालाई हेरौं । यति ठूलो निवास कसका लागि ? अहिले भैरहेको फराकिलो ठाउँलाई अझै फराकिलो बनाउन खोजेको कसका लागि ? झण्डा हल्लाउँदै र अघिपछि साइरन बजाउँदै सररर हुईंकिन पाइने थरिथरीका गाडी हुँदाहुँदै फेरि १८ करोडको गाडी चाहिएको कसका लागि ? यी सबै धन चाहिएको कसलाई ? विद्यालाई होइन ? अनि त्यतिका धनको स्वामित्व लिन खोज्ने विद्या ठूलो कि नाम मात्रैको धन ठूलो ?’
धन ठूलो भनेर एकोहोरो तर्क गरिरहेका कमलासनका सल्लाहकारलाई यो तर्क पनि ठीक लागेन । उनले भने, ‘महंगा गाडी, फराकिलो ठाउँ खोज्नुको कारण के हो नि मित्र ? यी सबै कुरा साना भएका भए रहर हुन्थ्यो ? खोजी हुन्थ्यो ? सानातिना कुरामा ठूलाबडाको रुची हुन्थ्यो ? ठूला र महंगा कुरामै ठूलाबडाको रुची भएपछि ठूलाबडाभन्दा धनसम्पत्ति ठूलो भयो कि भएन ? त्यसैले विद्या होइन बाबै धन नै ठूलो हो ।’
‘अरे बाबा त्यही धनमा हालीमुहाली गर्ने मान्छे पो ठूलो हुन्छ त । ठूला धनसम्पत्तिमा राज गर्न खोज्ने मान्छे झन् ठूला । त्यसैले धनभन्दा विद्या ठूलो’ विद्या ठूलो भन्ने बक्रासनका सल्लाहकार फेरि बुरुक्क उफ्रिए ।
‘हैनहैन धन ठूलो ।’
‘हैन विद्या, हैन धन.........’
दुईथरीको हात हालाहाल नै हुने अवस्था आएपछि पद्मासनका सल्लाहकारले मध्यमार्गी उपाय निकाले । उनले भने, ‘यो परिस्थितिमा न विद्या सानो, न धन सानो । दुवै ठूलो । धन ठूलो भएकाले नै विद्यालाई धन चाहियो, अनि विद्या ठूलो भएकाले धन उनको पछि लाग्नु पर्यो । त्यसैले धनभन्दा विद्या ठूलो, विद्याभन्दा धन ठूलो ।’
अन्तिम अपडेट: साउन ३, २०७६
लाङटाङ म्याराथनमा भाट र राई प्रथम
सरकारले देखाएको सपना दुःस्वप्नमा परिणत हुने खतरा : डा भट्टराई
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने
अस्पतालमा खुट्टाको अपरेशन गर्दा बिरामीको ज्यान गयाे, आफन्तले ग...
पाँचथरमा निर्माणधीन पार्कको छत खस्दा २ जनाको ज्यान गयो, एक जन...
हिमालका हस्ती : जो हावाको बेगलाई चुनौती दिँदै अरुलाई बचाउँछन्
दिनारको भाउ घट्यो, अरु विदेशी मुद्रा स्थिर
बससँग ठोक्किएर माइक्रोबस खोलामा खस्दा १२ जना घाइते
हङकङमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका ३० जना प्रदर्शनकारी घाइते
सुनसरीमा एक जनाकाे घाँटी रेटेर हत्या
करेण्ट लागेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक वर्षपछि राहत सहयाेग
कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवाले गरेको विज्ञापनको विरोध गर्नुक...
अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका पाँच स्वास्थ्य प्रयोगशालामा शिलबन्दी
हिमालय एयरलाइन्सले आजदेखि काठमाडौँ–ढाका उडान गर्ने
३७ औं विपी स्मृति दिवस आज, विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै
महिलामा विषादीको उच्च सङ्क्रमण
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पद, पावर र पैसाको मोह देखियो: नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ
प्यान नभए तलब नै पाइन्न, सजिलोसँग यसरी लिनुहोस् प्यान
अमेरिका न मेराे हाे, न ट्रम्पकाे हाे, हामी सबैकाे हाे : मिशेल ओबामा